Ngabe ufuna ukuhambisa uhlelo lokusebenza njengomfuduki onekhono kakhulu?
Umthetho Wezokufuduka » Abafuduki abanamakhono amakhulu - umthetho wokufika
Isikimu sokufuduka kolwazi ngaphakathi kwenqubomgomo yomfokazi waseDashi senza ukuthi izinkampani zihehe abafuduki bezolwazi ngokushesha okukhulu futhi kalula. Abasebenzi abaqeqeshiwe abavela emazweni angaphandle kwe-European Union bangasebenza eNetherlands ngokwesibonelo isikhundla esiphakeme noma njengochwepheshe ngaphansi kwezimo ezinhle zohlelo.
BENKELANI ISICELO SEBANDLA ELIPHELELE KAKHULU?
Abafuduki abanamakhono amakhulu - umthetho wokufika
Uhlelo lokufuduka kolwazi olukhona ngaphakathi kwenqubomgomo yomfokazi waseDashi lwenza ukuthi izinkampani zihehe abafudukayo abanolwazi ngokushesha okukhulu futhi kalula. Abasebenzi abaqeqeshiwe abavela emazweni angaphandle kwe-European Union bangasebenza eNetherlands ngokwesibonelo isikhundla esiphakeme noma njengochwepheshe ngaphansi kwezimo ezinhle zohlelo. Kodwa-ke, bobabili abafudukayo bolwazi nomqashi kumele bahlangabezane nemibandela ethile.
> Izimo ezifudukayo ezinamakhono amakhulu
> Cela ukuthutha ulwazi
> IKhadi le-Blue Blue
Izimo ezifudukayo ezinamakhono amakhulu
Ingabe ungumfuduki wolwazi futhi ufuna ukufaka isandla emnothweni wolwazi waseDashi? Uma kunjalo, okokuqala uzodinga imvume yokuhlala. Ngaphambi kokuthola imvume yokuhlala, kufanele ube nesivumelwano sokuqashwa nomqashi noma isikhungo sokucwaninga eNetherlands esikhethwe yi-IND njengomxhasi owaziwayo futhi sifakwa kwirejista yomphakathi yabaxhasi abaziwayo. Kufanele futhi uthole imali eyenele futhi kufanele ngabe uvumile ngomholo ohambisana nemakethe nomqashi wakho.
Ngaphezu kwalokho, izimo ezimbalwa (ezingeziwe) zisebenza kuwe njengomfuduki onekhono kakhulu. Yiziphi izimo ngqo zincike esimweni sakho. At Law & More, abameli bokufika banendlela esheshayo neyomuntu siqu. Bazokujabulela ukukusiza ngesicelo sakho. Ngaphambi kokuthi uqhubeke nesicelo, ochwepheshe bethu bazokunikeza lonke ulwazi oludingekayo ukuze ungabhekani nanoma yiziphi izinto ezimangazayo.
Hhayi wena kuphela, kepha nenkampani lapho uzosebenza khona kufanele ihlangabezane nemibandela ethile. Ingabe uyinkampani efuna ukuqasha umfuduki onamakhono amakhulu? Uma kunjalo, okokuqala kufanele waziwe yi-IND njengomxhasi. Ukwethembeka nokuqhubeka kwenkampani yakho kubalulekile. Ngabe inkampani yakho yamukelwa njengomxhasi? Kuleso simo, inkampani yakho kumele ihambisane nezibopho ezilandelayo: umsebenzi wokuphatha, umsebenzi wokuhlinzeka ngolwazi nomsebenzi wokunakekelwa. Ngabe inkampani yakho yehluleka ukwenza njalo? Uma kunjalo, lokhu kungaholela ekuhoxisweni kokuqashelwa njengomxhasi.
Ngabe ufuna ukuthuthela eNetherlands? Shayela ngosizo lwezomthetho
Cela ukuthutha ulwazi
Unikezwe imvume yokuhlala? Uma kunjalo, isikhathi sokuba semthethweni kwemvume yakho yokuhlala siyolingana nesikhathi senkontileka yakho yokuqashwa nesingaphezulu kweminyaka emi-5. Imvume inganwetshwa unaphakade.
Ngesikhathi sokuvunyelwa kwemvume yakho yokuhlala, ungashintsha umqashi njengomphambukeli onekhono kakhulu bese ujoyina enye inkampani evunywa yi-IND njengomxhasi. Kokubili umdala nomqashi omusha kufanele babike ngokushintshwa kwakho komsebenzi ku-IND kungakapheli amasonto amane.
Ngabe uphenduka umsebenzi njengamhambi onamakhono amakhulu? Uma kunjalo, unelungelo lokuthola isikhathi sokucinga esiyizinyanga ezintathu kusukela osukwini umsebenzi wakho usuqediwe ngalo. Uma ungakwazi ukujoyina omunye umqashi (umxhasi) njengomfuduki onekhono kakhulu phakathi nesikhathi sokucinga, i-IND izobuyisa imvume yakho.
IKhadi le-Blue Blue
Kusukela ngoJuni 2011, umhambi onamakhono amakhulu uzokwazi ukufaka isicelo se-EU Blue Card (i-EU Blue Card) ngaphezu kwemvume yokuhlala edingekayo. I-EU Blue Card iyindawo yokuhlala ehlangene kanye nemvume yokusebenza yabafuduki abanekhono kakhulu abanobuzwe belinye lamazwe angamaLungu e-European Union.
I-European Blue Card inikeza umfuduki onamakhono amaningi ngezinzuzo eziningi. Okokuqala, umqashi womfuduki onekhono kakhulu akufanele aqashelwe yi-IND njengomxhasi. Ngaphezu kwalokho, njengomfuduki onamakhono amakhulu, ophinde abambe i-European Blue Card, ungasebenza kwelinye iLungu leLungu ngemuva kokusebenza eNetherlands izinyanga eziyi-18, uma nje uhlangabezana nezimo kulelo Lungu Lamalungu.
Ukuze ufaneleke i-European Blue Card, kufanele uhlangabezane nezimo ezinzima kunemvume yokuhlala njengomfuduki onekhono kakhulu. Isibonelo, kufanele ube nenkontileka yokuqashwa izinyanga eziyi-12 noma ngaphezulu, uqede okungenani uhlelo lweminyaka emithathu lwe-bachelor kwezemfundo ephakeme (hbo) futhi uthole okungenani umkhawulo weholo we-Blue Card ngenyanga.
Ithimba lethu labameli bezokufika lizokuhola futhi likuhambise isicelo ku-IND. Ungathanda lokhu noma uneminye imibuzo futhi ungathanda ukwelulekwa? Sicela uxhumane Law & More. Sizokujabulela ukukusiza.